साँच्चिकै सलह खान हुन्छ की हुदैन ? हेर्नुहोस्
July 4, 2020 1467
कोरोना भाइरसको आतङ्क’ले विश्वलाई थिचिरहेका बेला नेपालमा सलहको आतङ्क थपिएको छ । कोरोनाले मानि’सको ज्या’न लिइरहेको छ भने सलह चाहिँ मानिसले मीठो मानेर भोजन गरेको चर्चा छ ।
विदेशी मुलुकमा सलह भुटेर, उसिनेर, साँधेर अनि झोलसहित खाएका कैयौँ भिडियो युट्युब’मै भेटिन्छन् । नेपाल’मा यो खान हुन्छ भन्ने एकथरी छन् भने खान हुँदैन भन्ने मत राख्ने विज्ञ छन् र उनीहरूले चरा, कुखुरा वा हाँसलाई दाना बनाएर दिन सकिने बाटो पनि देखा’एका छन् ।
जोशी भन्छन्: मीठो मानेर खाए
काठमाडौँं उपत्यका’वासीले वर्षौंअ’घि नै सलहलाई हाँडीमा भुटेर खाएको इतिहास छ । १०१ वर्षीय शताब्दी पुरुष तथा संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले नेपालमा सलह आएको उतिबेलै देख्नुभयो । उहाँले त्यतिबेला सलह पोलेर अनि हाँडीमा भुटेर काठमा’डौँका मानि’सले खाएको समेत देख्नुभएको छ ।
उहाँका अनुसार सल’ह आकाशै ढाकेर आएका थिए । करोडौँ सङ्ख्या’मा थिए भन्ने उहाँको अनुमान छ । उहाँ स’लहले बादल जस्तै सूर्य नै नदेखिने अँध्यारो बनाइदि’एका थिए भनेर स्मरण गर्नुहुन्छ ।
सलह जहाँ बस्यो रु’खपात, धान बा’ली त्यहाँको हरियाली सखाप बनेको उहाँ सम्झनुहुन्छ । उपत्यका त्यो समय खेत नै खेत अनि वरिपरि हरियाली जङ्गलले भरिएको थियो । सलह’ले खाएपछि बुच्चे र ठुटे बोटबिरुवा हेरेर किसान दिक्क भएका थिए ।
उहाँका अनुसार काठ’माडौँका विभिन्न स्थानका मानि’सले सलह समाते । त्यति मात्र होइन सडकमा लहरै भाग लगाएर बेच्न पसल नै थापे । शताब्दी पुरुष जोशी आफू खाने अनि म’सला हालेर मीठो बनाएको सलह अरूलाई बेचेर चखा’एको मैले देखेको हुँ भन्नुहुन्छ ।
एक भागको दुई पैसादेखि चार पैसा सम्म:मा बेच्ने गरेका थिए । उहाँको कथनले नेपाल:मा सलहले आ:तङ्क मच्चाएको र मानिसले खाए’को पनि पुष्टि हुन्छ । सरदार भीमबहादुर पाँडले त्यस बखतको नेपाल पुस्तकमा वि. सं. १९८५ मा आ’काशै ढाक्ने गरी नेपा:लमा सलह आएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँले सलहले अनिकाल नै पारेको र मानिसले सलह खा:एको पनि चर्चा गर्नुभएको छ । पछि’ल्लो समय सलह खरिद बिक्री गर्ने क्रम बढेको छ । यसलाई पका:एर खाने प्रवृत्ति पनि देखि’एको छ । सलह खान हुन्छ भन्नेले खान थालेका छन् ।
खान हुन्न कोरो’ना जस्ता भाइरस फैलाउन सक्छ भन्ने अर्काथरीले नखान प्रेरित गरिरहेका छन् । त्रिभुवन विश्ववि’द्यालयका कीट विज्ञ डा. प्रेमबहादुर बुढा सल’हमा उच्च प्रोटिन हुने भएकाले खान हुने बता’उनुहुन्छ । याे खबर गाेरखापत्र दैनिकमा छ ।
Prevखुमन अधिकारीलको यसपालिको तीज गीत भयो भाइ’रल…
Nextअञ्जली अधिकारी र मेलिना राईको तीज गीत भयो भाइरल (भिडियोसहित)
हिन्दी फ्लिम ‘कबिर सिंह’ मा घरेलु कामदारको भूमिका निभाएकी पुष्षाको फो’टोसुटले हंगामा
फेसबुकमा यस्तो स्टाटस लेखे’को तीन घण्टामै संसार छा’डे नविनले
सुस्मिता चोकमा आमा पुग्दा टोलवासीको भिड लाग्यो, बिचरा ! धरधरी रोइन् आमा (भिडियो सहित)